Tilmaamaha ay Gabdhuhu Wiilasha ku Raacaan - Daryeel Magazine
Tilmaamaha ay Gabdhuhu Wiilasha ku Raacaan
Toddobaadkii hore waxaan blog-geyga ku baahiyay qormo falanqaynaysay tilmaamaha wanwanaagsan oo ay raggu gabadhaha ku raacaan. Waxaa gar ila noqotay, siixiibbada qaarna ay codsadeen in wax laga dhaho sifooyinka ay gabdhuhu rabi lahayeen in ragga nolosha la wadaagaya ay yeeshaan. Qof walba qofka hadda garab jooga ee uu nolosha la qaybsanayo ama uu damacsan yahay in uu la qaybsado, waa qasab in uu ku qanacsan yahay. Ma jiro qof qof kale si go’an ula dookh ah. Balse waxaa jira dhaqammo iyo astaamo wanwanaagsan oo bani’aadamku isku wada raacsan yahay. Sidaas oo kale, waxaa jira astaamo guud oo ay gabar walba rabto in uu wiilka riyadeedu yeesho. Bal tilmaamahan hoose isha la raac oo arag inta aad ka shinsato.
Qof ayaa wuxuu weyddiiyay dadka adeegsada bogga Quora su’aal ah ‘waa maxay astaamaha ay gabdhuhu rabi lahaayeen in ay wiilashu yeeshaan?’ Jawaabaha ay dadku bixiyeen, oo gabdho u badnaa, waxaa ka mid ah:
Maskax, maskax, maskax- in uu caqli leeyahay. Dumar haddii aan nahay waxaan jecelnahay wiil aan wax ka baran karno. Dumarku way jecelyihiin ninka maskaxda furan, xog-ogaalka ah oo wax yaqaan.
W/Q: Shakir Mohamed Abdullahi
Qiso Xanuun Badan (Caasi waalidayn Ma Guulaysto) Sidee U Noqon Kartaa Qof Dabeecad Wanaagsan? KA FAA’IIDAYSO: Casharrada Nolosha Psychologists waxay yiraahdeen…